“လုင်ငန်းသိမ်းချိန် “ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Photography » “လုင်ငန်းသိမ်းချိန် “	9
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Aug 21, 2016 in Photography, Poetry |9comments
Foolish Girl says: ကိုပေါက်ဘယ်နေရာလည်း လှလိုက်တာ
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: မူဆယ်မြိုံအနောက်မြို့ပါတ်လမ်းမှာပါ
ကျယ်ခေါင် ဆင်ဖြူပေါက် ကနေ့ မြောက်စူးစူးသွားရင် ရောက်နိုင်ပါတယ်။
Foolish Girl says: no2&3အရမ်းမိုက်တယ်
kotun winlatt says: လှချက် . . .
ဒီလိုပုံလေးတွေမြင်လေ ကင်မရာကောင်းကောင်းလေး လိုချင်လေပဲ . . . (ရောဂါ ရောဂါ)
Thint Aye Yeik says: အိမ်အပြန်နွား မြက်မစား..တဲ့။
ပုံကို ကြည့်ရတာာတော့… စားချင်ပါတယ်ဆိုရင်တောင်…မြက်ကို သိပ်မတွေ့ရ…။
အောင် မိုးသူ says: ရှုခင်းက မိုက်လိုက်တာ
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: မိုက်ဆို ရိုက်တဲ့သူကလဲ
kotun winlatt says: ပုံလေးတွေက လန်းတယ် စာသားလေးတွေပါ ရေးပေးထားတော့ ပိုပြည့်စုံ သွားတာပေါ့ . . .
တရုတ်မလှလှလေးတွေပုံရော တင်ပေးပါဦးခင်ဗျ ဟေ ဟေးးးး
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကောင်မလေးပုံမရိုက်ရဲဘူး